I-hood ikakhulu sisigqubuthelo sentloko esivala zombini intamo kunye nobuso kwaye ivale phantsi kwesilevu. Ngale nkcazo, iintsimbi zikwabala njengeentsimbi.
IiHoods zinokunxitywa ngabafazi, amadoda kunye nabantwana. Xa kuziwa kwifom yobudoda, cinga ngento ebizwa ngokuba yi-balaclava okanye i-aviator hood. Iibhothi zamabhinqa, ngakumbi iihoods zesinxibo zesintu, ngoku zivaliwe ikakhulu ngemitya phantsi kwesilevu.
KumaXesha Aphakathi, kwakuyinto eqhelekileyo ukuba abafazi abatshatileyo bathwale umnqwazi. Ngabantu abangatshatanga kuphela abavunyelweyo ukushiya iinwele zabo zingavezwanga. Intetho ethi "ngena phantsi kwentloko" isekwe kwesi siko.
Ngaphakathi kutoliko lwendabuko lwamaphupha, uphawu lwephupha elithi "hood" ikakhulu lubandakanya umnqweno wobuthongo wokuzibandakanya okanye ukutshata. Le ntsingiselo inokuba yinxalenye yohlalutyo lwamaphupha ale mihla. Nangona kunjalo, lo mxholo wamaphupha uhlala ubizwa ngokuba isilumkiso ukuqonda ukungcolisa.
Ukuba abantu abadala baphupha i-hood, ngoko, ngokuhlalutya ngokubanzi kokulala, oku kunokuthembisa ukuhlala ngokuzolileyo kunye nolonwabo ngokuvusa ubomi. Ukuba indoda ibukele umfazi ephupheni ngelixa ebopha i-hood yakhe, uvumelekile kuye ithamsanqa elingalindelekanga ndijonge phambili. Abahlobo bakho baya kungqineka benyanisekile kwaye bathembekile. Kwiphupha lomfazi, i-hood entsha inokubhekisa kubahlobo abalungileyo kunye nokudlala ngothando njengomfanekiso wephupha.
Nabani na ofihla iinwele zakhe phantsi kwe-hood, umnqwazi okanye ikepusi ephupheni labo ufuna ukufihla ukusebenza kwabo ngokupheleleyo kwabanye. Ngenxa yokuba umphuphi woyika ukuxhokonxa umona. Ukubeka ikepusi yokuhlamba ephupheni kutolika ukutolikwa ngokubanzi kwephupha njengophawu lwe amandla okomoya lowaphuphi.
Umbala we-hood ephupheni unokubaluleka ekutolikeni ngokubanzi. Ke ngoko, uphawu lwephupha "imibala" kufuneka iqatshelwe apha ukufumana ulwazi oluthe kratya malunga nomyalezo wephupha. Ingubo emnyama enophawu lwephupha inokusetyenziswa, umzekelo, njenge isilumkiso ukuba iqondwe phambi kwabahlobo bobuxoki. Ukuba i-hood imhlophe ephupheni, oku kungabonakalisa ubumsulwa bephupha.
Ukutolikwa kwengqondo kwephupha ubona kumfanekiso wephupha we-hood ikakhulu uphawu khu seleko kunye nokhuseleko. Kodwa nokuba lilungu leqela elithile kwi el mundo Ukuvuka kunokufihla ngasemva kweli phupha.
Kubonwa ngengqondo yomnqwazi, uphawu lwephupha "hood" linokubhekisa kwiinjongo kwaye Imibono bhekisa kumntu oleleyo. Unokukufihla oku kwabanye kwihlabathi elivukayo, njengoko uneentloni ngabo. Ke ngoko, le nkalo yokutolika iphupha ikhatshwa sisicelo sokuba nesibindi ngakumbi kwaye uhloniphe iindlela zabo zokucinga.
Ukuba ihood isetyenziswe njengesigqubuthelo sokukhusela xa ulele, umzekelo emsebenzini, umphuphi kufuneka azi ukuba ukhona Ngaphakathi Ndifuna ukukhusela kwabanye abantu. Uloyiko lokwenzakala kwaye ke ayizivezi yonke into ngaye. Ukuba ubeka ihood phezu kobuso bakho njengesigqubuthelo sokuzikhusela ephupheni, zama ukungabonisi ekuhleni iinjongo zakho zokwenyani kwihlabathi elivukayo.
I-hood okanye ikepusi njengephupha linokuchazwa njengenxalenye yempahla. Ke ngoko, uphawu lwephupha "iimpahla" kunye nokutolikwa kwalo linokuba nomdla kulo mongo.
Ngokomoya, umfanekiso wephupha we-hood unokubhekisa kwi Uthintelo bonisa ngaphakathi kombono wokomoya wephupha. Kwihlabathi elivukayo, kuya kufuneka ucinge malunga nokuba le mida inokuba yintoni kwaye ujongane nayo.